ကလေး မြင့်သော ကုလားထိုင် CY-F ကို အလုပ်ရုံ စိတ်ကြိုက် နှင့် လက္ကား - Wahsun နောက်ဆုံးပေါ် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်လက်မှတ်
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > မိခင် နှင့် ကလေး ထုတ်ကုန် > ကလေး မြင့်သော ကုလားထိုင် > ကလေး မြင့်သော ကုလားထိုင် CY-F ကို
ကလေး မြင့်သော ကုလားထိုင် CY-F ကို
2 တွင် 1 ဘက်စုံသုံး ကုလားထိုင်, dတွင်nတွင်g ကုလားထိုင် - လွယ်ကူသော ကုလားထိုင်.3ပိတ်ဆို့ ဗျတ် ညှိနှိုင်းမှု, ငါ-ပုံ ကာကွယ်မှု လုံခွုံသော ခါးပတ်။ ကြာရှည်ခံသော ကူရှင်ချုပ် နိုင် အလွယ်တကူ ဖြစ် သုတ် သန့်ရှင်းသော နှင့် တစ်ဦး dတစ်ဦးmp အထည်။
ကုန်ပစ္စည်းနိဒါန်း:ရိုးရှင်းကုလားထိုင် - 1 ဘက်စုံသုံးကုလားထိုင်, dinning ကုလားထိုင်အတွက်2။3လုပ်ကွက်ဗန်းညှိနှိုင်းမှုငါ-shaped ကာကွယ်မှုအန္တရာယ်ကင်းခါးပတ်။ အကြမ်းခံကူရှင်ချုပ်လွယ်ကူစွာတစ်ဦး damp အထည်နှင့်အတူသန့်ရှင်းတဲ့သုတ်နိုင်ပါသည်။
1 မှာကလေးအမြင့်သဘာပတိ2(ဗားရှင်းက F)
PP + မှ PU
* 92CM 62 * 77
ရိုးရှင်းကုလားထိုင် - 1 ဘက်စုံသုံးကုလားထိုင်, dinning ကုလားထိုင်အတွက် 1.2။3လုပ်ကွက်ဗန်းညှိနှိုင်းမှု
2. အစားအသောက်တန်းပလတ်စတစ်, Eco-ဖော်ရွေသားရေ
3. ခိုင်ခံ့သော Anti-စလစ်, ငါသည်-shaped ကာကွယ်မှုအန္တရာယ်ကင်းခါးပတ်
hot Tags:: ကလေး မြင့်သော ကုလားထိုင် CY-F, စိတ်ကြိုက်, စက်ရုံ, လက္ကား, ပူသော ရောင်းချခြင်း, မူပိုင်ခွင့်, နောက်ဆုံးပေါ်, dueable, အရည်အသွေး, အဆင့်မြင့်, အနိမ့် စျေးနှုန်း
ကလေး လွယ်ကူသော မြင့်သော ကုလားထိုင်ကလေး Dinning မြင့်သော ကုလားထိုင်2 တွင် 1 ဘက်စုံသုံး ကလေး လွယ်ကူသော မြင့်သော ကုလားထိုင်2 တွင် 1 ဘက်စုံသုံး ကလေး Dတွင်nတွင်g မြင့်သော ကုလားထိုင်
ကလေး မြင့်သော ကုလားထိုင် CY-G
ကလေး မြင့်သော ကုလားထိုင် Dinning CY-E
ကလေး မြင့်သော ကုလားထိုင် Dinning CY-D ကို
ကလေး မြင့်သော ကုလားထိုင် Dinning CY-C မှာ
ကလေး မြင့်သော ကုလားထိုင် Dinning CY-တစ်ဦးက